Devuan 3.0 Beowulf tonga miaraka amin'ny base Debian 10.4, Kernel 4.19 ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Tonga i Devuan 3.0 Beowulf miaraka amin'ny base Debian 10.4, Kernel 4.19 ary maro hafa
Ny fanombohana ny ny kinova vaovao amin'ny fizarana Linux "Devuan 3.0 Beowulf" izay fork an'i Debian, saingy mampiavaka ny tsy fananana systemd.
Ny sampana vaovao dia miavaka amin'ny fifindrana mankany amin'ny fototry ny fonosana "Buster" Debian 10, ankoatr'izay ao anatin'ny tetikasa, kinova misy fonosana Debian 400 eo ho eo no noforonina sy novaina mba hialana amin'ny fatorana rafitra, famerenana marika na fampifanarahana amin'ny endri-javatra fotodrafitrasa Devuan.
Ny fonosana roa (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) dia tsy misy afa-tsy ao Devuan ary mifandraika amin'ny fanamboarana ireo trano fitahirizana sy ny fiasan'ny rafitra fananganana. Raha tsy izany dia manaraka tanteraka an'i Debian i Devuan ary azo ampiasaina ho fototry ny fananganana fananganana Debian manokana tsy misy rafitra.
Ny birao misy anao dia miorina amin'ny Xfce sy Slim display manager, na dia misy ihany koa ny tsy azo atao amin'ny fametrahana ny KDE, MATE, kanelina ary LXQt.
Raha tokony systemd dia omena ny rafitra fanombohana SysVinit mahazatra. Ny safidy iray dia ny fomba fiasa tsy misy D-Bus omena, izay mamela ny famoronana fikirakirana birao kely indrindra mifototra amin'ny boaty mainty, fluxbox, FVWM, FVWM-crystal ary Openbox manager.
Mba hampifanarahana ny tamba-jotra dia soso-kevitra safidy configurator NetworkManager izay tsy mifamatotra amin'ny systemd. Raha hitantana ny fotoam-pampiasan'ny mpampiasa ao amin'ny KDE, ny Cinnamon sy ny LXQt dia nanolotra elogind, logind safidy, tsy mifandray amin'ny systemd. Fampiasana Xfce sy MATEconsolekit.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Devuan 3.0?
2 Sintomy ny Devuan 3.0.0 Beowulf
3 Ahoana ny fanavaozana ny Devuan 3.0 Beowulf avy amin'ny Devuan 2.x?
Inona no vaovao ao amin'ny Devuan 3.0?
Ao amin'ity kinova vaovao amin'ny fizarana ity, araka ny voalaza tery am-piandohana, ny zava-baovao lehibe dia ny fifindra-monina amin'ny tobin'ny fonosana "Buster" an'i Debian 10 (ireo fonosana dia nampifandraisina tamin'ny kinova Debian 10.4) sy amin'ny Ny kernel Linux kinova 4.19 dia omena.
Ny iray amin'ireo fanovana misongadina ao amin'ny Devuan 3.0 dia ny fisarahana fizotry ny eudev sy elogind hanoloana ny singa rafitra monolithic tompon'andraikitra amin'ny fitantanana rakitra fisie ao amin'ny lahatahiry / dev, ny fikirakirana ny fifandraisana sy / na ny fanapahana ireo fitaovana ivelany, ary ny fitantanana ireo fotoan'ny mpampiasa.
Ary koa, amin'ity kinova vaovao ity misy ny fanohanana ny maritrano ppc64el izao, ho fanampin'ny sehatra i386, amd64, armel, armhf, ary arm64 teo aloha.
Azontsika atao koa ny mahita a mpitantana efijery vaovao, miova ny firafitry ny entana ary lohahevitra birao vaovao no aroso. Azonao atao ny mampiasa ny manager runit system ho solon'ny / sbin / init ary mampiasa ny rafitra fanombohana OpenRC ho solon'ny serivisy sysv-rc ary fifehezana haavo haavo.
Finalmente raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Sintomy ny Devuan 3.0.0 Beowulf
Raha te hampidina ity fizarana Linux ity ianao tsy maintsy mankany amin'ny tranokala ofisialiny ianao ary ao amin'ny fizarana fampidinana azy afaka mahazo ny sarin'ny rafitra ianao avy amin'ny iray amin'ireo fitaratra misy azy. Ny tsara indrindra dia ny mampiasa ilay akaiky anao indrindra, ny rohy izany.
Ahoana ny fanavaozana ny Devuan 3.0 Beowulf avy amin'ny Devuan 2.x?
Si Raha manana Devuan kinova 2.x napetraka ianao dia azonao atao ny manavao ilay kinova vaovao tsy miverina mametraka ny rafitra.
Ho an'ity tsy maintsy manokatra terminal ianao ary manatanteraka ireto baiko manaraka ireto. Voalohany dia hampianay ny tahiry Devuan 3.0 amin'ny loharanom-baovao.list, izay hita eo amin'ny làlana: /etc/apt/source.list
Izahay dia manitsy azy miaraka amin'ny mpampanonta tianay ary manampy ireto trano fitahirizam-bokatra ireto (zava-dehibe ny fanehoan-kevitra amin'ny tahiry hafa misy # amin'ny voalohany na esorina mba hisorohana ireo olana amin'ny fanavaozana):
Mitahiry ireo fanovana izahay.
Ao amin'ny terminal no anaovanay fanavaozana:
Ary avy eo dia soratantsika ireto baiko manaraka ireto:
Ary farany manavao ny rafitra izahay amin'ny:
Eto isika dia tsy maintsy miandry satria manomboka misintona ny fonosana sy ny fanamboarana rehetra ilaina amin'ny fanavaozana. Ity fizotrany ity dia handany fotoana, ka amin'izany ny terminal dia azo ampiasaina hanatanterahana asa hafa izay havaozina ny rafitry ny solosainao.
Amin'ny farany dia tsy maintsy hamerenanao ny solosainao ny fiovana rehetra hisy vokany ary rehefa manomboka azy indray ianao dia tokony ho hitanao fa efa manana ny kinova Devuan napetrakao.
Raha tsy mahomby ny fonosana, ny fonosana tsy nahomby dia tokony hamboarina ary avy eo manomboka ny fanavaozana indray.
Ireo mpampiasa nifindra monina avy tao amin'ny ASCII ary mampiasa ny upower dia mila mampihena ny fonosana avoakany hialana amin'ny olana:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tonga i Devuan 3.0 Beowulf miaraka amin'ny base Debian 10.4, Kernel 4.19 ary maro hafa
luix dia hoy izy:
Tena tsara, hifindra amin'ny mpizara vaovao aho, miaraka am-pitandremana, mazava ho azy ..
Valio i luix
Javier Ortega Conde (Malkavian) dia hoy izy:
Mampiasa fitsapana Devuan amin'ny PC misy ahy aho, koa ho ahy dia famotsorana an-tsokosoko izany, manohy manavao sy mandanjalanja ...
Valiny tamin'i Javier Ortega Conde (Malkavian)